Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 7 April 2020	• 10 Comments
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 4 April 2020	• 33 Comments
Pane chikonzero chakareruka nei iwe ungati hutachiona kazhinji haugone kutapurirana uye nei mabhaisikopo senge ari pazasi kwechinyorwa ichi mafirimu akadaidzwa anoparadzirwa. Ndokusaka hutachiona husingagoni kukambaira kana kufamba hwoga; kunyange iyo coronavirus .. Haisi utachiona, […]
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 31 March 2020	• 18 Comments
Parizvino mibvunzo mizhinji irikuuya mukati senge: "Munotarisira riini kuti zvitoro nemarestaurant azovhurwe uye muzoenda kuzororo zvakare?" "Ndinokumbira izvi nekuti murume wangu ari muindasitiri yekugamuchira vaeni." kana kuti "Unonzwa sei nezve musika weimba?" Kuchenjera kutengesa imba yangu here? ", Asi zvakare […]
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 31 March 2020	• 26 Comments
Pakutanga ndakatsanangura kuti zvinoita kunge Q Anon ndiyo yekuchengetedza mambure kune vanhu vanoona kuti pane zvakawanda zviri kuitika nehutachiona hwekorona (ona pano nepano). Izwi rekuti 'Q' rakafanana chaizvo nepfupi kune mutsara kana mutsara kana concatenation; ucha […]
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 30 March 2020	• 4 Comments
"Germany inoda kuvaka app munguva pfupi inotevera inocherekedza kuti ndiani mushandisi we-smartphone anga achisangana naye, anodaro Reuters neMuvhuro. Nyika yacho iri kutevera tsoka dzeSingapore. The Singaporean app inonyoresa kuburikidza neBlux kana iyo smartphone iri pedyo neimwe foni. Kana muridzi weiyo smartphone aine coronavirus […]
Total Visits: 1.451.627